Ogaden News Agency (ONA) – Taariikhda Dhaq-dhaqaayadii Ardeyda Jaamacada Addisababa
Taariikhda Dhaq-dhaqaayadii Ardeyda Jaamacada Addisababa
Waxaa caalamka saaqay dabayl wadata udug ah inaan kaligii-taliye danbe aysan bulshadu ka gabban, qoraaga/suxufig caalamiga ah ee soomaaliyeed Raage Omar-na haddaad daawatay Documentary-giisan uu ugu magac daray “ The death of Fear”, waxay marag u tahay arinkaa. Waxan sidoo kale wada xusuusanaa badhtameeyihii 2005-ka, waagii ay Ethiopia ka dhaceen kacdoonada iyo rabshadaha ay wadeen ardeyda Jaamcadaha Wadanku. Waxaana filayaa ineynu badankeenu iyo dadka siyaasada Ethiopia indha indheeyaaba aynu sugeynay kacdoon iyo rabshado iney dhici doonaan markey soo jeediso EPRDF tu natiijada doorashada ee u badneyd ku shubashada. Haddaba wixii aynu filaynay oo ahaa rabshado ayaa bilowday, waxayna ka bilowdeen meeshi ay waligeedba rabshadaha iyo kacdoonada Ethiopia ka bilaaban jireen oo ah Jaamacda Addis Ababa oo hadda ka hor la oran jirey Haile Selaase University .
Idaacadaha mucaaradka ama qawmiyadaha dulman haddii aad dhagaysato waxay leeyihiin axwaashan ku soo korortay dhulalka carbeed/muslimka ama afrikaanka, sida Egypt , Tunisia , Libiya iwm. Waxay walwal ku haysaa taliska Ethiopia , haddii ay ka bilaabato Addis-Abeba-na waa arrin khatar ah. Waxaana aad iyo aad u xasuustaa bishii September ee sanadkii 2005ka, waagii rabshadaha ardaydu ka bilowmeen Addis abeba, nin ay BBC World Service (TV) wareysanaysey oo safaarada Mareykanaka ee Addis Ababa horey la taliye uga ahaan jirey, ayaa waxay weydiiyeen arrinta khatarteedu inta ay la egtahay? Wuxuuna ku jawaabay arrintu waa khatar oo Ethiopia waxay caan ku tahay in rabshadaheedu ay ku bilaabmaan (Ethiopian…….are triggered by this kind of incidents and they go out of control) sidan oo kale dabadeedna ay faraha ka baxaan oo ay fufaan. Hadalka u diblomaasigaas hore yiri runimadiisa waad aragtaan oo waatan arrimihii si doqoni-magaratey ah ay u fidayaan.
Maadaama waxa kacdoonkan la filayay bilaabay ay yihiin dadkii waligood bilaabi jirey ee jaamacada Addis Ababa (oo horey loo oran jirey Haile Selasse 1st University), waxaa haboon bal ineynu wax ka ogaano taariikhada halgameed ee ardayda Jaamacada Addis Ababa.
Jaamacada Addis Ababa waxaa la aasaasay, 1951 (under the administration of Canadian Jesuits). Intii hadaba u dhaxeysay 1951 ilaa 1960 ardeyda jaamacadu dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo la sheegi karo ma ayna lahayn. Waxaana hawlahooda maamuli jiray maamulka Jaamacada. Waxaa kale oo liidatay isku xirnaantooda siyaasadeed iyo mida ijtimaaci. Haddaba in kasto u jirey xanaaq ku wajahan xukunka boqortooyada ee dhaxaltooyada ah ee ka jiray wadanka, haddana waxaa xanibayeye in meel looga soo wada jeedsado dhibakaas dhowr sababood oo kala ah:
1- Culeyska iyo xooga xukuumada Xayle Selaase oo badnaa
2- Kaniisada Ethiopian Orthodox oo boqorka dadka u tuseysay inuu ALLE doortey
3- Iyo dhaqan ahaan waalidiinta ardeyda oo ilaa xad caruurtooda dhadhaqaaqooda faraha ku hayay.
Haddaba arrimahani waxay is badaleen wixii ka danbeeyey 1960 gii. Waxaana sababo u ahaa dhowr arrimood oo ay ugu horeyso arrin inqilaab dhicisoobay oo ay sameeyeen labo nin oo walaalo ah lana kala oran jirey General Mengistu Neway iyo walaalkiis ka yar oo la oran jirey Germame Neway. Haddaba labada nin waxay kala ahaayeen, General Mengistu Neway oo ahaa taliyaha cidan waardiyeeya boqortooyada (waa kuwa u dhigma koofiyad gaduudii Siyad Barre), walaalkisna wuxuu ahaa nin Mareykanaka waxa ku soo bartey ( Columbia University ) oo la oran jirey Germame Neway. Ilma Neway hddii ad odayaasha Soomaaliyeed weydiiso aad iyo aad ayeye u garanayaan, waxayan Soomaalidu ku hala qabsan jireen “Gumeysiga u diiday Germaame maxaa aniga qoorta ii surey”. Waxayna Germame ku xasuustaan, markuu waxbarashadiisa ku soo dhameystey Mareykanaka ayaa waxaa loo magacaaby gudoomiye gobol isagoo ka noqday dhowr meelood oo kala dambeeyey. Waxaana magaalooyinka u gudoomiyaha gobolka ka ahaa ka mid ah magaalada JIG-JIGA. (N.B. magaalada Jig-Jiga waa magaalo cajiib ah oo wixii Ethiopia inqilaabka ka ridey ama isku deyey sida Mengistu Xayle Mariam iyo Germaame Neway labaduba iyaday joogi jireen).
Haddaan u soo noqdo inqilaabkii ilmo-Neway, waxaa fikrada iska lahaa Germaame oo ahaa nin LEFTIST ah, waxaana keenay awooda ciidamada General Mengistu oo soo dagaal galiyey ciidamadii uu xukumayey. Waxyaabihii ugu weyn ee inqilaabka fashiliyey (inkatoo ay sababuhu badan yihiin) waxaa ka mid ahaa Baadariga Kaniisada Orthodox oo ka sheegay idaacad iney ninmaankaas inqilaabka wada ay RIDOOBEEN oo laga dheeraado. Haddaba inqilaabku wuxuu dhacay mar u Xaile Selaase ku maqnaa booqasho u ku aaday dibada oo an u maleynayo iney ahayd MEXICO . Waxaa haddaba intuu inqilaabku u socday u General Mengistu u tagay ardeyda Jaamacada maanta looyaqaan ADDIS ABABA UNIVERSITY oo barigaa la oran jirey HAILE SELASSE 1st UNIVERSITY. Wuxuuna ka codsaday iney gacan siiyaan inqilaabkiisa. Inqilaabkii wuu fashilmay, markuu arrintaas ogaadeyna Germaame oo guriga boqortooyad qol kamid ah ku haystey maxbuus ahaan wasiiradii Xayle Selaase ayaa baas mariyey oo dilay dhamaantood, kadibna isaga iyo walaalkiis iyo intii ka ag dhaweyd ayaa baxsady. Balse nasiib daro waa la soo qabtey oo waxaa la daldalay Germaame oo meyd ah iyo Mengitu oo nool, waxaana lagu ag daldalay Kaniisada Tekele Haymanot ee ku taal magaalada Addis Ababa .
Arrintan inqilaabku waxay ardeyda ku reebtay raad an dhamaaneyn. Waxa kale oo ka sii darnaa, in Xayle Selaase u Qasrigii (Palace) kii u Germaame ku diley wasiiradiisa u ku wareejiyeye Jaamacada inuu ka mid noqdo CAMPUS ka mid ah CAMPUS yadeeda. Waxaana la yiri qolkii lagu laayeye wasiiradu wuxuu ka mid ahaa qololka Jaamacda ee ay ardaydu arki jireen ama wax ku baranjireen.
Arrintan inqilaabka oo ah mid wax ka badashay tafkiirkii ardeyda iyo fikradii ay ka haysteen boqortooyada oo ahayd lama taabtaan ayaa wax iska badaleen. Balse waxaa haddana ku soo birey laba arrimood oo kale oo ay midi tahay. In September 1961 u ururkii ERITREAN LIBERATION FRONT (ELF) (N.B. waa kii ka horeeyey EPLF ta Isaayaas Afewarki) u dagaal buuxda ku soo qaaday ciidamadii fadhiyey meelo ka mid ah Eritrea . Tani oo ka dhigtey lama taabtaankii Xayle Selaase inuu yahay wax lagu dhici karo oo waliba la soo hujuumi karo.
Haddaba mida ugu dambeysa ayaa waxay tahay, shir ay yeesheen wadamadii Afrika ee xorta ahaa 1958 kii oo ka dhacay Accra, Ghana (Accra Conference of Independent African States in 1958), ayaa isagoo Xayle Selaase iska dhigaya odayga Africa u ku balanqaaday inuu wadamada Afrikaanka ah u ardeydooda siin doono SCHOLARSHIP sanad walba. Ardeyda waxbarshadan ku timid ee Afrikaanka ahaa ayaa waxay ka yinmaadeen wadamo xornimadooda qaatey oo ay ka soo dhaceen halgamo siyaasadeed iyo kuwo hubeysan. Waxa kale oo ay ka yimaadeen wadamo ay saxaafadu ilaa xad xor ay ahayd oo dadku ay lahaayeen maskax furan iyo biseyl siyaasadee. Waxay haddaba ardeydani qeyb weyn ka qaateen iney ilaa xad raad ku yeeshaan fikradaha asaxaabtii ay isla dhiganayeen.
Haddaba ardayda Jaamcada Addis Ababa waligoodba waxay ahaayeen kuwo halgan ku abtirsada oo leh taariikh halgan oo an la qarin karin layisakana soo dhaxley oo u Jiilba Jiilka kale u soo gudbinayeye. Wixii ka dambeyey bartamihii 1960s waxaa ka dhex taagnaa xukuumadii Xayle Selaase iyo ardeyda Jaamcada Addis Ababa dagaal cad oo an la qarina karin. Dagaalkoodi iyo halgankoodi joogtada ahaa ayaa wuxuu sababay in dawladii Xayle Selaase lagu wada kaco oo ay dhacdo. Ka dibna ay Jaamacda Addis Ababa ardaydeedi iyo ardeydii dugsiyada kaleba, wixii ka dambeyey dhicitaankii Xayle Selaase ay u kala jabaan laba qeybood oo kala ahaa xisbi la oran jiray EPRP (Ethiopian Peoples Revolutionary Party) oo ahaa shuuci ayna u badnaayeen qowmiyada Tigreega iyo qaybo kamid ah qowmiyada Axmaarada; iyo xisbi kale oo la oran jirey MEISON oo isna aaminsanaa shuuciyad oo ay u badnaayeen qowmiyada Oromada iyo qaybo ka mid ahaa Axmaarada. Labadan xisbi wey is khilaafeen waxaana ka dhex dhacay dagaal, dagaalkaas oo ahaa iney MEISON la safatay Dergiga (Mengistu Haile Mariam), EPRP na ay dagaal dhuumaaleysi oo magaalooyinka ah ay ku qaaday Dergiga iyo MEISON. Waxaa mrkii hore cagta la mariyeye EPRP oo firxadkii ka haray ay u carareen buuro ku yaal gobolka Tigray ( Tigre ) oo la yiraahdo ASIMBA. Waxaana hadhaagoodii baaba’shay markey xoogeysatay jabhada TPLF. Qoladaas halkaas ayeye sheekadoodu ku xirantay, inkastoo ay baryahan qaar iyaga ka mid ahi ay leeyihiin wali waanu jirnaa oo waxaanu nahay xisbi dimoqraadi ah. Waxayna leeyihiin WEBSITE. Qoladii Mengistu la safatey ee ahayd MEISON laftigeeda markuu Mengistu xoogeystey ayuu cagta mariyey oo xitaa waxaa la dilay ninkii ururkaas GODFATHER ka u aha oo la oran jirey MR. HAILE FIDA si an la aqoon oo ay dadka qaar yiraahdaan waxaa la dilay isagoo baxsanaya.
Arrinta maanta taagan ayaa ka duwam arrimihii hore ee ku saabsanaa halgankii ardayda Jaamcada Addis Ababa. Waxayna arrintu uga duwantahay dhowr sababood oo kale ah:
1- Barigii hore Jaamacadaha iyo ardeyduba wey yaraayeen
2- Barigii hore ardeydu waxay ka sinaayeen (LEFTIST TENDENCY) oo mideynayeye
3- Barigii hore waxay ardeydu u badnaayeen Axmaaro iyo wax ka ag dhow
4- Hadda ardeyda iyo Jaamacaduhuba wey bateen
5- Hadda ardeydu waxay aad u qadariyaan (THEIR ETHNIC ALLEGIANCE)
4- Hadda qowmiyadihii oo dhan waxay leeyihiin dad wax bartey ama ugu yaraan wax fahmaya.
Sababahan iyo kuwa badaan oo ay ka mid yihiin qaar ay Ethiopia dunida saddexaad la wadaagto iyo qaar kale oo ay kala simanatahay AFRICA ayaa waxay ka dhigayaan arrinata maanta Ethiopia ka socota midaan la saadaalin karin. Hadda ka hor ayaan iri Ethiopia oo ay kanisadu hor boodayso sidey u dhaqanto waa la yaqaan, sidoo kalena iyadoo ay Shuuciyad hor cararayso waa la soo arkey. Balse waxaana hadda ka hor la arag iyadoo nidaam dastuuri-qawmiyadeed loogu magic daray tijaabinaysa oo ay isugu darsantay inay ku fashilanto, dhanka kalena ay ku soo beeganto xilli ay daafaha caalamka gilgilayaan dabayl wadata udug ah inaan kaligii-taliye danbe laga baqin, waxaa intaa dheer qawmiyaadka Ethiopia ku wada nool oo ay colaad taariikhi ah ka dhaxayso, Waa arrin u baahan in si fiican loola socdo oo laga war sugo natiijada ka soo baxada (Insha Allaahu) tijaabadana ka socota sheybaarkan (Laboratory) weyn ee magaciisu yahay ETHIOPIA.
Peace & mercy everywhere 🙂